တစ်သင်္ချာပြဿနာဖြေရှင်းရေး၏ဂုဏ်အသရေပေါ်ကပတေရု Gaidarov - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပတေရုသကင်းဘရစ်မှာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏အဓိကအကျိုးစီးပွားသင်္ချာသိပ္ပံပညာ၏, သူကတန်းရှစ်၌မိမိသင်္ချာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေစတင်ခဲ့သည်။
သင်္ချာပြိုင်ပွဲနှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများအတွက်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးသူမြားကိုအချိန်ကုန်ဆုံးလျက်ရှိသောသူတို့ကို (ဥပမာ4နာရီ) နှင့်အဘယ်သူ၏အဖြေကိုဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းကော်မတီကနေဖြင့်လူသိများကြသည်ပြဿနာများကိုတစ်ဦး fixed နံပါတ်ရှိပါသည်။ သူတို့ကသာပြဿနာကိုပိုခက်ခဲတယ်, သိပ်လူတန်းစား၌ပြစ်မှားမိအလုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ဒုတိယတစ်မျိုးမှာသုတေသနစာတမ်းရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျောင်းသားတစ်ဦးသေးဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ဘို့အချိန်မကန့်သတ်လည်းမရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမယ့်ပြဿနာအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်, အလုပ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအတွေ့အကြုံရှိသင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးဆရာနှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဟာသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနစီမံကိန်းကိုပေါ်တွင်အလုပ်ဆင်တူပါသည်။
စည်းကမ်းကြောင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးပြိုင်ပွဲနှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများအတွက်အညီအမျှအောင်မြင်သောသောရှားပါးကိစ္စတွင်ပါပဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါစည်းမျဉ်းမှထိုကဲ့သို့သောကံကောင်းချွင်းချက်ဖြစ်၏။ ကို 'တိုတို' 'ပြိုင်ပွဲ၌ငါရုရှားသချာင်္အိုလံပစ်နှင့်ဘော်လကန်နိုင်ငံများအကြားအလားတူပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါစီမံကိန်းကိုရေးသားခြင်းငါသောအခါမူကားငါသည်ငါ့ဒြပ်စင်အတွက်တကယ်ဖြစ်၏။ အကြှနျုပျ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဥရောပနှင့် Pre-ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နေသော MIT ကသုတေသနသိပ္ပံအင်စတီကျုနှင့် Intel ISEF မှာနွေရာသီကျောင်း၌ငါ့ပါဝင်မှုနဲ့တူထိုကဲ့သို့သောတိကျမ်းစာ၌လာသည်အစီရင်ခံစာများနှင့်စီမံကိန်းများ, အတူဖြစ်ကြသည်။
အရေးအပါဆုံးတဦးတည်း, သင်တန်း, သင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုယုံကြည်သကဲ့သို့ငါအဓိကဦးတည်းကြောင်းအခွက်တဆယ်ကိုကစားမယ့်အခန်းကဏ္ဍမဝန်ခံပေမယ့်မပေးရပါမည်။ ဒါဟာခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေသည့်အခါအခြားတစ်ဖက်တွင်, လိုအပ်သည့်သော့ချက်အရည်အချင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်တင်ဆက်မှုစွမ်းရည်များဖြစ်ကြသည်။ ပြင်ဆင်မှုအဆင့်စဉ်အတွင်းဆက်သွယ်ရေး၏ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စတိုင်များအမျိုးမျိုး (ဓာတ်လှေကားမိန့်ခွန်းပြန်ကြားနေကြတယ်, ပိုစတာပြင်ဆင်နေတစ်ဦးတင်ပြချက်အောင်) ကျင့်သုံးနေကြသည်နှင့်နည်းစနစ်တစ်ခုအရေအတွက်ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရာနှင့်အတူကျွမ်းကျင်နေကြသည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအတိုင်းအတာအထိဒါကစကားပြောဆိုမှုမကိုင်နိုင်သူမလိုလားအဖြစ်ချာ၏လူကြိုက်များပုံရိပ်နှင့်အတူဆန့်ကျင်။
တစ်ကြော့ဖြေရှင်းချက်စိတ်ထဲပေါက်သည့်အခါတခါတရံ, ငါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနှင့်အတူတက်လာနိုင်ခဲ့သည်ဖြေရှင်းချက်၏အလှတရားရဲ့ခံစားမှုအရ, ဒီအလှတရားမဆိုလမ်းထဲမှာမြင်သို့မဟုတ်ကြားသိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနှင့်, တကကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်တွင်တွေ့ကြုံဖြစ်ပါတယ်။ ငါအရာအရပ်သားများကိုမြင်နိုင်မဟုတ်ရင်တောင်ကျွမ်းကျင်သူများကတစ်အချို့သောအပြုသဘောရလဒ်၏ဂုဏ်အသရေခံစားရနိုင်ပါသည်, တိုင်းလယ်ပြင်၌ဆိုပါစို့။
ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်္ချာ၏ပဉ္စလက်၏မကြာခဏတွေ့ကြုံခံစားနောက်ထပ်ခံစားချက်အသိပညာ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား subfield အကြောင်းကို ပို. ပို. လေ့လာသင်ယူရန်အလိုရှိ၏။ ငါအချို့ပြဿနာသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရတဲ့အခါ, မေးခွန်းများကိုတစ်ဦးယုတ္တိနိုင်ရန်အတွက်နှငျ့သငျအမြားဆုံးအရေးတကြီးတဦးတည်းမှအဖြေတစ်ခုတွေ့ပြီတစ်ချိန်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ် လာ. , ထို့နောက်ပင်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အရာလာမည့်တလာ။ ဤသည်တဖြည်းဖြည်းအချို့ဧရိယာသို့တိုးတက်ငါ့အဘို့အထူးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။
ငါလူ့အသက်ကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖို့, ဒါမှမဟုတ်လူမျိုး၏အုပ်စုတစုမှတိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖွဲ့စည်းသောပြဿနာများ, ဦးစားပေးလိမ့်မည်။ လူ့ဘဝမှာတခြားအရာအားလုံးထက်အထက်တန်ဖိုးထားရပါမည်။
ဉာဏ်ပဂေး, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, သင်္ချာ, လူ, ကြောငျးသား | | rating:5/ 30